Khilaaf culus oo ka dhashay xiritaanka Kalfadhiga 5aad ee Baarlamaanka Hirshabeelle – Kalfadhi
Khilaaf culus oo ka dhashay xiritaanka Kalfadhiga 5aad ee Baarlamaanka Hirshabeelle
Waxaa isa soo taraya khilaaf culus oo ka dhax bilaawday Guddoonka Baarlamaanka Maamulka Hirshabeelle iyo Xildhibaanada, kaas oo ka dhashay fariin qoraaleed lagu fasaxay Kalfadhiga 5aad ee Golaha Wakiilada Hirshabeelle.
Sheekh Cusmaan Barre Maxamed Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Hirshabeelle oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa Mobeeladooda ugu diray fariin qoraal dhamaan Golaha wakiilada waxa uuna ku wargeliyay in uu xiran yahay Kalfadhiga 5aad ee Baarlamaanka.
“Mudanayaal iyo Marwooyin sida ku xusan DDGH, Q 37aad faqrooyinkiisa 1&2 aad iyo xeer hoosaadka Golaha Qodobkiisa 20aad faqrooyinkiisa 1&2 aad, waxuu Guddoomiyaha Golaha ku wargelinayaa in xubnaha Sharafta leh asgoo tixraacaya qodobadaas dastuuriga ah, in Kalfadhiga 5aad ee Golaha uu xiranyahay” ayuu yey u dhigneed fariin qoraaleedka loo diray Xildhibaanada ee ka soo baxday xafiiska Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cusmaan Barre Maxamed.
Shalay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle waxaa ka dhacay kulan ay yeesheen Xildhibaanada Baarlamaanka Hirshabeelle waxaana shir guddoomiyay Marwo Canab Axmed Ciise Guddoomiye ku xigeenka 2aad ee Baarlamaanka Hirshabeelle.
Xildhibaanada ayaa ka soo horjeestay fasaxa uu galay Baarlamaanka waxayna ku tilmaameyn sharci darro iyo in lagu xadgudbay dastuurka Baarlamaanka. Sidoo kale Xildhibaanada ayaa sheegay in aysan hadda fasax geli karin maadaama xaalad qasan ay ka jirto gobalka Hiiraan.
Canab Axmed Ciise, Guddoomiye ku xigaanka Baarlamaanka Hirshabelle ayaa ku tilmaamtay sharci darro amarka uu ku xirey guddoomiyaha baarlamaanka kalfadhiga Golaha Wakiilada.
“Waxaa la ii sheegay in guddoomiyaha baarlamaanka oo jooga Xamar inuu xildhibaanada u soo direy fariin uu ku sheegayo in uu ku xirey baarlamaanka.”ayay tiri Marwo Canab Axmed Ciise.
“Haddii la xirayo baarlamaanka waa in qofka xiraya uu joogo golaha,qof ka maqan Hirshabelle iyo golaha baarlamaanka ma xiri karo baarlamaanka.”ayay sii raacisay Marwo Canab Axmed.
Guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka Hirshabelle Canab Axmed Ciise ayaa ugu baaqday guddoomiyaha baarlamaanka inuu dib ugu soo laabto xarunta baarlamaanka Hirshabelle ee magaalada Jowhar.
Xildhibaan Mukhtaar Tuurre oo ah Guddoomiyaha Guddiga Maaliyadda ee Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa Kalfadhi u sheegay in aysan qaadan karin fasaxa iyo xiritaanka Kalfadhiga 5aad islamarkaana ay ka soo hor jeestayn.
“Sax ma ahan mana qaadan karno in guddoomiyaha oo ku sugan Muqdisho uu fariin qoraaleed ku soo xiro Kalfadhiga” ayuu Kalfadhi u sheegay Xildhibaan Mukhtaar Tuurre.
“Hirshabeelle waxaa ka jira dhibaatooyin iyo khilaaf xoog leh lamana joogo waqti baarlamaanka fasax galo ee waa xilli hadii uu Kalfadhiga xiran yahay ay mudneed in kulan deg deg ah la isugu yeero” ayuu yiri Xildhibaan Mukhaat Tuurre.
War-bixin: Ajandaha rasmiga ah ee golaha wakiillada Puntland ay ka shaqaynayaan Kalfadhigan oo la qaybiyay
Madaxweynihii hore ee Hirshabeelle oo baarlamaanka maamulkaasi ugu baaqay in ay ka shiraan Khilaafka gobalka Hiiraan